YotaPhone 2 dia havaozina amin'ny Android 5.0 Lollipop | Androidsis
alexis martinez | | Finday, Android Version
Con ny efijery roa misy azy, ny iray amin'izy ireo vita amin'ny ranomainty elektronika mahavita manome hatramin'ny 100 ora famakiana, dia ataon'izy ireo manintona ny saina ny fahitana raha vao hitanao izany. Ny YotaPhone 2 dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo telefaona hafahafa indrindra izay azontsika jerena eny an-tsena amin'izao fotoana izao ary betsaka kokoa taorian'ny namoahan'ny ekipan'ny Yota vaovao momba izany.
Anisan'ireo zava-baovao voatanisa ao amin'ny fanambaran'ny orinasa voalaza, misy roa miavaka noho ny hafa. Ny voalohany dia ilay smartphone handray amin'ny volana vitsivitsy manaraka dia manavao ny Android version 5.0, fantatra koa amin'ny hoe Lollipop. Ary ny faharoa dia amin'ny faran'ity volana ity dia ho tonga ny variant fotsy amin'ity fitaovana mahaliana ity.
Ho fanampin'ireo zava-baovao voalaza etsy ambony, ny ekipan'ny fampandrosoana ao ambadiky ny yota phone 2, manatsara ny fitaovana amin'ny kojakoja vaovao, izay ahitantsika a Sofotra finday. Manohy ny vaovao dia naniry ny hiara-hiasa amin'ny orinasa sasany ny orinasa hitondra bebe kokoa ny rindranasa sy serivisy vaovao kasaina hampiasaina amin'ny takelaka fanoratana elektronika. Eto ambany eto izahay dia manisy antsipiriany ireo rindranasa samihafa izay hahatratra ity terminal ity tsy ho ela:
spritzer: Hanampy ny mpamaky hanana ny mailaka, ny boky ary ny fampandrenesana hita foana izy ireo noho ny efijery amin'ny ranomainty elektronika.
Psy (x) Audio: Noho io fampiasana io dia hihena ny havizanan'ny fihainoana audio compressed hatramin'ny 192 kHz.
Maharaha vaovao: Hanampy fahalalana izy io ary handamina ny rindranasan'ny mpampiasa ho azy. Ny fampiharana sy serivisy tena ilaina indrindra dia haseho, arakaraka ny fotoana sy ny fahazaran'ny mpampiasa.
Rindrambaiko an-tsary: Hanokana ny efijery tsirairay ianao ho an'ny tontolo iainana mety hitranga, toy ny asa, ny tena, ny ankizy, na ny lalao.
Everypost: Fampiharana iray izay hanamora ny famolavolana azy manokana, hamoahana ary hanoratany votoaty amin'ireo tambajotra sosialy manan-danja indrindra.
Manamafy: Sehatra hijerena ireo fampiharana fanatanjahan-tena sy fitsangatsanganana.
Na dia hita ao amin'ny tsena voafantina aza ny YotaPhone 2 dia mikasa ny hitondra ilay fitaovana any amin'ny tsena hafa ilay orinasa noho ny fampielezan-kevitra amin'ny famoriam-bola miaraka amin'ireo orinasan-telefaona lehibe, toa ny AT&T sy T-Mobile.
Na dia ny fotsy dia ho tonga amin'ny faran'ny volana martsa ary ny fanavaozana ny Android 5.0 dia ho tonga afaka volana vitsivitsy, raha tsy izany dia tsy misy daty voafaritra hoe rahoviana no hisy ny kojakoja, ary koa ireo rindranasa samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » YotaPhone 2 dia havaozina amin'ny Android 5.0 Lollipop ary hanana kinova banga
Avereno jerena ny efijery Alcatel OneTouch Idol 3 amin'ny 5'5 "